China ALuminum CNC manodina mpiorina sy mpamatsy | Walley
CNC mihodina faritra ：
Ny lathes CNC antsika dia mamela ny hafainganam-pandeha avo lenta sy avo lenta ho an'ny plastika sy ny metaly. Ny fizotran'ny fihodinana dia ahafahana mamorona géometrijika ivelany sarotra sy atody anatiny. Ny fahafahantsika mihodina dia misy amin'ny iray-off hatramin'ny famokarana batch ny singa. Milina fitotoana mihodina koa miaraka amin'ny tilikambo fitaovana misy fahombiazana avo kokoa.
Tombony amin'ny milina fanodinana
(1) hanafohezana ny rojo fizotry ny famokarana vokatra ary hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana. Ny fanodinana sy ny fikosoham-bary fanodinana natambatra dia afaka mamita ny rehetra na ny ankamaroan'ny fomba fanodinana indray mandeha, amin'izay dia hanafohezana ny rojom-panodinana vokatra. Amin'izany, amin'ny lafiny iray, mihena ny fotoana fanampiana amin'ny famokarana ateraky ny fanovana ny karatra fametrahana, ary mihena koa ny tsingerin'ny famokarana sy ny fotoana fiandrasana ireo fitaovana, izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
(2) Ahena ny isan'ireo clamping ary manatsara ny fahamendrehana fanodinana. Ny fihenan'ny isan'ny famatrarana karatra dia misoroka ny fanangonana hadisoana noho ny fanovana ireo mari-pahaizana napetraka. Mandritra izany fotoana izany, ny ankamaroan'ny fitaovana fanodinana fitotoana fitotoam-bolo dia manana fiasan'ny detection an-tserasera, izay afaka mahatsapa ny detection eo an-toerana sy ny fifehezana marina ny angon-drakitra manan-danja amin'ny fizotry ny famokarana, ka manatsara ny fahamendrehan'ny vokatra.
(3) Ahena ny habakabaka sy ny vidin'ny famokarana. Na dia somary avo aza ny vidin'ny singa tokana misy ny fitaovana fanodinana fitotoana fitotoana, noho ny fanafohezana ny rojolon'ny fizotry ny famokarana sy ny fihenan'ny fitaovana ilaina amin'ny vokatra, ary koa ny fihenan'ny isan'ny fitaovana, ny faritra atrikasa ary vidin'ny fikojakojana ny fitaovana, afaka mampihena amin'ny fomba mahomby ny fananana raikitra rehetra Ny vidin'ny fampiasam-bola, ny famokarana ary ny fitantanana. "
Machining CNC mihodina
MAX cnc machining OD amin'ny 300X300mm
Toetran'ny velarana: Ra≤0.1μm
Fametrahana mazava tsara: +/- 0.005mm ~ +/- 0.02mm
Fampisehoana sary: ​​PDF, JPEG, AI, PSD
Min fifehezana fandeferana amin'ny +/- 0.01mm.
Fomba fanodinana: milina cnc manokana, dingana hafa dia misy ny fanoratana stamp mafana, fametahana tery
Vokatra nomena anarana Cnc Machining manodina faritra
Size Haben'ny namboarina
fametrahana mazava tsara +/- 0.005mm ~ +/- 0.02mm
Application ho an'ny masinina fandidiana fandidiana
Certification ISO9001: 2008 ， IATF16949, ROHS
Fahaiza-manao ara-materialy Aluminium, varahina, varahina, varahina, metaly manamafy, metaly sarobidy, vy vy, firaka vy
Type Broaching, fandavahana, fametahana / fametahana simika, fametahana laser, fikosoham-bary, serivisy fanaovana milina hafa, Prototyping haingana, fitodihana, Wire EDM
Firafitra bobongolo Continuous
1) Manolotra horonantsary sy sary miaraka amin'ny antsipiriany malalaka mandritra ny famokarana.
2) Mamokatra arakaraka ny maha-marina ny sary, ny fandrefesana ny fiangonana hamantarana ny fiasa sy ny fifehezana kalitao hentitra mba hahazoana antoka ny tahan'ny fiverenana 0
3) Ny baiko 99% dia azo antoka ny fotoana fandefasana
4) Ny fitaovana ampiasaintsika dia tsara indrindra
5) Serivisy an-tserasera 24 ora
6) Ny vidin'ny orinasa mpifaninana amina kalitao sy serivisy mitovy amin'izany
7) Ny fomba famonosana mety indrindra amin'ny vokatra samihafa.
Previous: Fitaovana milina EDM
Manaraka: Sombin-javatra mihodina CNC Aluminium
Aluminium Cnc mihodina
Aluminium Cnc manodina Sleeve
Cnc Aluminium faritra
Cnc Aluminium nivadika ampahany
Cnc mihodina ampahany aluminium
Cnc manodina ampahany aluminium